SXAE-280 tsy azo tanterahana vita printy sy milina fanontam-pirinty milina matevina-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Malagasy SXAE-280 tsy azo tanterahana vita printy sy milina fanontam-pirinty milina matevina
Famokarana: fanontam-pirinty tanteraka sy ny milina fanontam-pirinty
fanontam-pirinty sy sary miloko mafana ary sary mihetsika amin'ny zavatra miloko, glasy na plastika. tavoahangy misy divay, tavoahangy misy tavoahangy, tavoahangy glasy, tavoahangy glasy, fitaratra sy plastika hafa.
1. sata mifehy mekanika mba handefasana tavoahangy. Ny rafitra tsotra, ny asa mora, ny fikojakojana ambany, ny fisoratana anarana marina, ny automation avo, ny fanontana haingana.
2. Firaketan-tserasera na marika famantarana ny marika. Ny loko mba hijerena ny fahamarinan'ny fisoratana anarana
3. Fandefasana PLC sy ny fikotranana, miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso, ny milina mihazakazaka, azo antoka, haingam-pandeha.
4. Ny fitaovana ampiasaina:
Fandefasana entana sy famindrana horita;
Rotana mandeha ho azy ho an'ny tavoahangy;
Fanafody fiantohana fiara;
Tobim-panavotana eo aloha sy ny rejisitra mainty;
Tsy misy lahatsoratra tsy vita printy;
UV na LED rafitra UV.
5. Fanampenam-bava mafana na varahina.
6. Ny marika amin'ny ampahany lehibe dia an'i Taiwan, Frantsa, Alemana, Etazonia ary Japon, tsara kalitao.
7. Fiarovana amin'ny CE
Fomba fanontam-pirinty: 1200 Pieces / hora (azo ovaina ho an'ny endrika sy printy samihafa)
Masom-basy: L 3400 * W 1200 * H 2200mm
fikarohana ary mamolavola tanteraka ny fametrahana milina fametahana milina fanenitra.
rafitra fiarovana fiantohana varavarana, manisa ny rafitra fakan-kevitra, R u0026 D automatique fanontam-pirinty fanontam-pirinty tanteraka.
Fiara karousel / conveyer haingana, fiovana haingam-pandeha, famokarana mahomby, tsara kalitao maoderina vita pirinty milina fanontam-pirinty sy fanontam-pirinty fanontam-pirinty.